Khadka Wadada tareenka Dunida wuxuu ku jiri doonaa İzmir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirNabadgelyada Waddada Aduunka ayaa lagu dhigi doonaa İzmir
13 / 09 / 2018 35 Izmir, tareenka, hawlaha, Tariin, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Nidaamka Tareenka fudud (HRS), havaray, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY, taraamka
dhaqdhaqaaqa tareenada eurasia
Shirkadda Eurasia Railway, Tareenka fudud, Kaabayaasha iyo Farsamada Sayniska 10-12 April 2019 waxay diyaarineysaa inay martigeliso magacyada hogaamiyayaasha caalamiga ee jidka tareenka ee Izmir.
Eurasia Rail waa mid ka mid ah kan ugu weyn uguna quruxda badan ee adduunka ee 3 ah oo ka dhacaya Eurasia Rail ayaa la gaarsiin doonaa ajandaha ugu dambeeya ee casriyeynta, horumarka iyo tiknoolajiyada iyo shirarka la qaban doono si siman.
Siemens, Alstom, Yapıray, Wasaaradda Gaadiidka, TCDD iyo kuwa ku xiran Eurasia Rail, halkaas oo ay ka qeybgali doonaan kaqeybgaleyaal muhiim ah oo ka kala socda waddamada sida Jarmalka, Faransiiska, Czech Republic, China, Italy iyo Russia, Bozankaya, Bombardier, Knorr Bremse, Metro Istanbul, Metro Izmir, Caf, Kardemir iyo Aselsan, Yapı Merkezi waxay kaqeybqaadi doonaan shirkadaha ugu waaweyn qeybta.
qaybaha keentay Turkey ee abaabulayaasha carwada group hoggaamineed Turkey ee ITE ku yaalla shirkadaha Idiris - EUR 8 abaabulay Fairs International. Tareenka Caalamiga ah, Nidaamka Tareenka fudud, Bandhiga Kaabayaasha iyo Suuqgeynta - Eurasia Rail; 10 - 12 Abriil 2019 waxaa lagu qaban doonaa carwada Izmir Gaziemir.
Bandhigga ayaa lagu qaban doonaa aagga ku dhowaad 14 bin m2. Wasaaradda Gaadiidka, arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, Wasaaradda Tareennada, Turkey Midowga Chambers iyo is-weydaarsiga Badeecadaha (TOBB), KOSGEB oo waxaa sidoo kale ay taageerayaan ku Wasaaradda Dhaqaalaha.
qaybta gudaha Dibadda arkay xiiso badan oo ka yimid qaybaha xirfadeed Eurasia Rail la shir ganacsiga iyo iskaashiga fursado cusub oo isku mar la ogaaday by siinta ganacsiga ka qayb qaatay abuurista ugu dambeeyay tabo cusub, horumar iyo teknoolajiyada by maalgelinta waaxda la dhaqaajin doonaa in ajandaha.
Eurasia Rail waa kan kaliya iyo sedexda adduun ee ugu weyn ee caanka ah ee Eurasia Rail
Semi Benbanaste, Agaasimaha Kooxda Gaadiidka & Saadka ee Turkiga ITE Turkiga: Nidaamyada Tareenka ee adduunka ayaa maalin kasta sii qaata muhiimad badan sababtoo ah waxay yihiin kuwo deg deg ah, dhaqaale, bey'adeed, nabadgelyo iyo nidaam casri ah. Inkasta oo maal-galinta wadamada yurub ay sii socoto si loo kordhiyo casriyeynta iyo qaadista tareenada tareenada, waxaa jira bartilmaameedyo aad u culus iyo maalgalin ku wajahan waddankeenna. Nidaamkan dhexdiisa, bartilmaameed halis ah ayaa laga dhigay waddankeena, sida kordhinta shabakada tareenka ee 25 kun kiilomitir. Si loo gaaro hadafkani, maalgashiga tareenka xawaaraha sare ayaa muhim weyn leh, waxaana loola jeedaa in 2023 la xiro 77 adoo adeegsanaya shabakada xadiidka xawaaraha sare ilaa 42. Waxaa la qorsheeyay in 3 bin 500 ay ka kooban tahay xawaaraha sare iyo 8 bin 500 waxay ka kooban tahay xarumo tareen oo xawaare sare leh. Intaa waxaa dheer, 1.000 km waa tareenka cusub ee 13.000 km, iyo xadiiqada 2023 waxaa lagu gaari doonaa 25.000. Dhinaca kale, dhamaystirka dib-u-cusbooneysiinta dhammaan khadadka iyada oo la samaynayo cusbooneysiinta xariiqda 4.400 km; Ujeedadu waa in la kordhiyo 10 ilaa 15 iyo load to 2011. Iyada oo ay ka qeybgalaan tartanka Eurasia Railway, oo isu keenaya wakiillada qaybta ugu weyn dunida ee tan iyo XNUMX, waxaan higsaneynaa inaan gacan ka geysano sidii aan u gaari lahaa hadafyadan qiimaha leh ee qaybta.
Benbanaste wuxuu hoosta ka xariiqay in Eurasia Rail uu yahay kan keliya ee ka jira gobolka Eurasia iyo mid ka mid ah saddexda garoon ee ugu waaweyn adduunka Tareenka wuxuu kaloo siiyay macluumaad ku saabsan carwada la qaban doono bisha Abriil. sida ay sanad walba tahay, waxay isu diyaarineysaa inay u noqoto madal wax ku ool u ah waaxda tareenka. Waxaa jiri doona kaqeybgaleyaal muhiim ah oo ka socda wadamo ay kamid yihiin Jarmalka, Faransiiska, Czech Republic, China, Italy iyo Russia. Dhab ahaantii, France Commercial-taliyaha qaadashada go'aan muhiim ah in Turkey ee 2019 sanadka kaliya ku dhawaaqday in ay taageeri doonaa caddaalad EurasiaRail. Marka laga soo tago horumarkan muhiimka ah, Siemens, Alstom, Yapıray, Wasaaradda Gaadiidka, TCDD iyo kuwa ku xiran, Bozankaya, Bombardier, Knorr Bremse, Metro Istanbul, Metro Izmir, Caf, Kardemir, Aselsan, shirkadaha hormuudka ka ah waaxda ayaa ansixiyay kaqeybgalkooda. 10-12 Abril 2019 ayaa qabanqaabin doona sideedaad Eurasia Rail ee Izmir, halkaas oo kulammada ganacsiga ee labada dhinac loo qorsheeyay inay si weyn uga qaybqaataan qaybta tareenka iyo dhaqaalaha qaranka.
Inay iibsadaan guddiyada suuqyada la beegsanayo ayaa lagu martigelin doonaa Target
Barnaamijka Dib-u-dejinta Guddiga Dib-u-dejinta oo abuuraya, kaas oo la abaabuli doono si loo abuuro soo iibsi cusub, horumarin ganacsi, fursado cusub oo ganacsi iyo fursado wada-shaqayneed oo caalami ah, ayaa la xaqiijin doonaa taageerada Wasaaradda Dhaqaalaha. Waxaa martigeliyay ITE Turkey, guddiyada iibsashada waxaa lagu martiqaadi doonaa suuqyada bartilmaameedka.
Isbahaysiga Shirkadda Waddooyinka ee Caalamiga ah ee Tirakoobka Eurasia Railway oo bilaabi doonta Izmir 2019
Magaca Tamarta Tiknoolajiga si uu u sii wado Nabadgelyada Wadaagga
Gawaarida gaadiidka dadweynaha waxay joogi doontaa Istanbul
Shirka wadada tareenada adduunka ayaa soo jiidatay dareen weyn
Eurasia Rail 2017 Fair, Shirarka Caalamiga ah ee Waddada Tareenka, Furan
Doorka in Future ee Rail Regulation iyo Agaasinka Guud ee Turkey ee Sector Railway
Demirtaş: İzmir wuxuu noqon karaa xiddig ka mid ah waaxda saadka
Guddoomiyaha Gobolka Doolow Geedi waa laan-furan ee qaybta tareenada, TÜDEMSAŞ.
Mak-in Makine, oo ka mid ah shirkadaha muhiimka ah ee waddada tareenka, ayaa ku dhawaaqay kicitaan
Turkey Rafaa ahaa been abuurtay ee Sector Tareenka ee Thrace
Xorriyaynta Qeybta Tareenka iyo Dib-u-habeynta TCDD
Iyada oo la adeegsanayo SARUS, Sakarya wuxuu Noqon doonaa Madaxa Qaybta tareenka
Waaxda Waddada Waddada
tareenka caadiga ah
Maalgashiga Tiknolojiyada Sare
Tram Doping ee Gaadiidka Gaadiidka ee Gacanka
Antalya 3. Nidaamka Isgoyska marxaladda wuxuu ka shaqeynayaa gaasta oo dhan